I-Studio Technologies 'I-Model Technologies' I-XMUMX Audio Interface Exhaswe Umsakazi Wezemidlalo Ephezulu yasePoland - I-NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Isakazo Sokwasemthethweni se-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Studio Technologies 'Isibonelo Soxhumano Somsindo we-5412 Esusiwe Umsakazi Wezemidlalo Ephezulu YasePoland
WARSZAWA, POLAND, JULY 18, i-2019 - U-Sebastian Pawlak wethule uPawlaki Pro Audio ukusabalalisa imikhiqizo yomsindo kuma-broadcast ephezulu ePoland, kuhlanganise ne-Eleven Sports Network ethandwayo. Lapho umhlinzeki wesikhathi eside eyeka ukumnikeza umkhiqizo ovame ukuxuba / ukusabalalisa umkhiqizo, uPawlak waphendukela Studio Ubuchwepheshe, umkhiqizi womsindo womculo, izixazululo zevidiyo kanye ne-fiber-optic. Le nkampani inikezele ukwengeza isici esisekelwe kwisofthiwe ukuze sisekele isidingo sayo ngokusebenzisa i- Isibonisi Somsindo we-5412, i-Dante®platform ehambisanayo enika ikhwalithi ye-audio enhle kakhulu yezinhlelo zokusebenza zenethiwekhi ye-Audio-over-Ethernet (AoE).
I-Pawlak idinga ukufaka esikhundleni se-interface ye-analog yomsindo esetshenziselwa amakhamera kanye nezinyathelo zokulawula ezihambisana ne-4-wire intercom audio, ukuxuba imithombo eyisishiyagalombili kuya kokukhipha okulodwa nokusabalalisa umthombo owodwa wokubuyela ezindaweni ezingaba ngu-8. Lo mkhiqizo wefa wawusetshenziswa kakhulu ePoland, nakwezimakethe zomhlaba wonke, kepha kwaba nzima kuPawlak ukunikeza amakhasimende.
"Kwakuyithuluzi elisetshenziselwa kakhulu kule ndawo, ikakhulukazi kwezinye izinhlelo zokusebenza zokusakaza," kusho uPawlak. "Ngokungazelelwe, umkhiqizo womkhiqizo awusatholakali, okwenze kube nenkinga. Ama-intercom amaningi amasistimu esiwahlinzekayo ahlinzeka ngezokuthutha zomsindo we-digital nge-Ethernet, ngakho sacela i-Studio Technologies uma babe nomkhiqizo ohambisanayo. Ukulandela iziphakamiso zethu, i-Studio Technologies isikisela i-Dante-exhunywe i-Model 5412. Le nkampani yenza izinguquko ezimbalwa ze-software futhi yasinika isixazululo esihle kakhulu. Umkhiqizo usuphelile ukwenza okungaphezu kwalokho esikulindele, ukuhlinzeka ngezici ezidingekayo kanye nokuguquguquka kokukhetha kuphela inani leziteshi ezidingekayo. "
I-Studio Technologies, ngaphandle kokukhokha okungeziwe, yakwazi ukuthuthukisa ngokushesha isibuyekezo se-firmware ku-Model 5412 yaso esinikeze isixazululo esiphelele se-Pawlak. Amandla amasha manje aseyingxenye yezici ezijwayelekile ezinikezwa yunithi. Ukusebenzisa ukukhetha imenyu esekelwe isiphequluli, abasebenzisi bayakwazi ukufeza umsebenzi odingekayo we-intercom interface. I-Model 5412 itholakala ngezihumusho ezimbili, i-01 enezimpendulo eziyisishiyagalombili kanye nemiphumela, ne -02 enezinguqulo zokufaka ze-16 neziphumo. Kokubili ukwesekwa kwe-analog line-level input kanye nemiphumela yokuthutha okulalelwayo nge-Dante. Ukuxhuma kwe-Three Gigabit Ethernet namabili ama-AC namandla we-12 volt DC avumela ukwesekwa kokubanzi kokufaka.
Ngokusho kwe-Pawlak, ukuguquguquka okusha kwe-Model 5412-01 kuvumela ukuba isetshenziswe njengeyunithi ye-intercom interface unit, kanye nezinhlelo eziyisithupha noma ezine-port. Iziteshi ezihlala zingasetshenziselwa i-analog ejwayelekile kuya nasezintweni zokusebenza ze-Dante. Ukwengeza, wagcizelela izinzuzo ze-compact unit, encane evulekile, ehamba endaweni eyodwa ye-rack 19-intshi ejwayelekile.
"I-Model 5412 ihambelanise izixazululo zethu zangasese zangaphambili ngenkathi ihlinzeka ngezici ezengeziwe ku-unit single rack," kuchaza uPawlak. "Ukuba nokusebenza okuhambisana nesikhala esincane, isisindo esincane, futhi intengo ephansi kuyasiza kakhulu ekusebenziseni besebenzisa amaloli angaphandle okusakaza."
Ikhasimende lokuqala likaPawlak ukusebenzisa i-Model 5412 yi-Eleven Sports Network. Isiteshini siyingxenye yePolsat, umsakazo omkhulu wangasese ePoland. Isibonelo se-Model 5412 sisebenze njengesikhombimsebenzisi esibonakalayo esiphezulu sokulalelwayo, njengoba inethiwekhi idinga kokubili amandla ka-analog no-Dante.
"Amakhasimende ethu asebeke ukubeka i-Model 5412 emabhajethi abo amanje nesikhathi esizayo, ngenxa yokusebenza kwayo," kusho uPawlak. "Ngibheka izidingo zemakethe kanye nekusasa lobuchwepheshe bokulalelwayo, i-Studio Technologies izoba isikhombikubona somsindo wami wezinombolo zamakhasimende ePoland nasemhlabeni wonke."
Mayelana ne-Studio Technologies, Inc.
I-Studio Technologies, Inc. inikeza ngemikhiqizo ehambisanayo, ephezulu, ukusebenza kwemisindo kanye ne-fiber optic yezimakethe zomculo nezokusakaza ezisebenzayo. Isungulwe ku-1978, inkampani izimisele ukuklama nokukhiqiza izixazululo ezinokwethenjelwa, ezibiza izindleko, nezindlela zokudala ze-studio yokusakaza, inkundla kanye nezindawo ezinkampani. Eyaziwa ngokuthi "ukuklama indlela ochwepheshe abasebenza ngayo," inkampani ibhekwa njengomholi wemboni. Izigaba zomkhiqizo zihlanganisa ukuhamba kwe-fiber-optic, intercom kanye ne-IFB, izixhumo zomkhangisi, nezinhlelo zokulawula i-loudspeaker. Umzila okhulayo wemikhiqizo ye-audio-over-Ethernet uthola ukuqashelwa kabanzi. Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uvakashele iwebhusayithi ye-Studio Technologies ku www.studio-tech.com noma shayela i-847.676.9177.
isikhombikubona somsindo Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Cobalt Encoder Dante Inethiwekhi Yezemidlalo Eyishumi Nanye I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor phila ukukhiqizwa kwezemidlalo Amaloli angaphandle asakaza I-Studio Technologies Umlingisi wevidiyo	2019-07-18
Ngaphambilini: I-Jim Pattison Broadcast Group Implements I-Matrix's Media Ad Sales Platform Yonke Amapulatifomu Namakethe
Olandelayo: I-Youngster yakha ama-workflows anamandla nge-BLG